रास्पबेरी र वेनिला कट आइसक्रीम - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
मिठाई795 मिनेट10 व्यक्ति210२ क्यालोरी
यो क्रीमयुक्त र फ्लेवर्फुल रास्पबेरी वेनिला कट आइसक्रीम बनिरहेको छ यस गर्मी मा हाम्रो मनपर्ने आइसक्रीम।
को घरेलु आइसक्रीम तिनीहरू Thermomix संग गर्न सजिलो छ। यस संस्करणको लागि पनि तपाईंलाई फ्रिजको आवश्यक पर्दैन, त्यसैले त्यहाँ गर्मी उपचार मा लिप्त कुनै बहाना छैन।
साथै यो आइसक्रिम बनेको छ ल्याक्टोज बिना ताकि सबैले डेजर्ट वा स्वादिष्ट र स्फूर्तिदायी खाजाको मजा लिन सकून्।
"के तपाई थप जान्न चाहानुहुन्छ?" खण्ड नछुटाउनुहोस्। कहाँ तपाईंले केही तरिकाहरू पत्ता लगाउनु हुनेछ ताकि यो काटिएको आइसक्रिम तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
1 रास्पबेरी भेनिला आइसक्रीम काट्नुहोस्
2 यस भेनिला रास्पबेरी कट आइसक्रीमको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ?
स्वादले भरिएको एक काटिएको आइसक्रिम जुन तपाईं कुकी वा यो बिना सेवा दिन सक्नुहुनेछ।
तयारी समय: 13H
बेस क्रीम को लागी:
ल्याक्टोज-फ्री ह्विप क्रीम को 350 35० ग्राम (न्यूनतम% XNUMX% मिलीग्राम) चिसो
रास्पबेरी तहका लागि:
बेस क्रीम को २265 g
G 200 ग्राम रास्पबेरी
सुन्तलाको १ ड्यास
भनिला तह को लागी:
बेस क्रीम को २300 g
१ चम्मच (डेजर्ट आकार) भेनिला पेस्ट (नुस्खा हेर्नुहोस्)
गिलास र पुतली धेरै चिसो संग, हामी क्रीम राख्छौं र समय बिना हराउँछौं, गती it सम्म जब यो आकार लिन सुरु गर्दैन। यो पूर्ण रूपमा जम्मा गर्नुपर्दैन, केवल अर्ध-भेला हुनु।
हामी प्रोग्राम गति2र नोजल मार्फत, र मेशिन चलिरहेको साथ, बिस्तारै कन्डेन्स्ड दुध थप्न मिठो र भारी मिश्रण बनाउनुहोस्।
यो क्रीम हाम्रो स्तरित आईसक्रिमको लागि आधार हुनेछ र हामी यसलाई २ भागमा विभाजन गर्नेछौं: एउटा २2ग्राम र अर्को करीव 265०० ग्राम।
हामी लगभग २265 ग्राम क्रीम हटाउँदछौं, यसलाई रास्पबेरी तहको लागि आरक्षित गर्दै, र गिलासमा लगभग grams०० ग्राम छोड्छौं।
भेनिला पेस्ट थप्नुहोस् र को लागी मिक्स गर्नुहोस् Seconds सेकेन्ड, गति 15। हामी फ्रिजमा हटाउँछौं र रिजर्भ गर्दछौं।
सफा गिलासमा हामीले धोइएका र सुकेका रास्बेरीहरू, चिनी र सुन्तलाको जुस राख्यौं। हामी समयमा कुचल्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 10। हामी ब्लेड र कार्यक्रम तिर मिश्रण कम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समयको अन्त्यमा, हामी सबै बीजहरू हटाउनका लागि कूलिसलाई राम्रो जालमा चाल्दछौं।
यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्। तपाइँ प्रक्रियालाई गति दिन केही मिनेटको लागि यसलाई फ्रिजरमा राख्न सक्नुहुन्छ।
सिसा नधोईकन, हामीले आरक्षित गरेका २ cream g ग्राम क्रीम थप्नुहोस् र स्फेड रास्पबेरी कोलिज थप्नुहोस्। हामी दौरान मिक्स Seconds० सेकेन्ड, गति 30।
हामी जाँच गर्छौं कि मिश्रणसँग एक समान गुलाबी रंग छ, अन्यथा, हामी केहि अधिक सेकेन्डको लागि मिश्रण गर्दछौं।
क्रीम आयताकार मोल्डमा हाल्नुहोस्, मोल्डभर यसलाई राम्रोसँग वितरण गर्नुहोस् ताकि यो स्तर हो। हामी सतह चिकना र कम्तिमा minutes० मिनेट को लागी स्थिर।
समय पछि, हामी जाँच गर्छौं कि रास्पबेरी तह फर्म हो। यो पूर्ण रूपमा कम्प्याक्ट हुनु हुँदैन, केवल भ्यानिला कोटिंगलाई समर्थन गर्न पर्याप्त छ।
हामी फ्रिजमा राखिएको वेनिला लेयर होशियारीका साथ खन्याउँछौं। हामी लेयरलाई सम्पूर्ण सतहमा वितरण गर्दछौं ताकि यो स्तर हो र हामी सतह फेरि फेर्दछौं।
सेवाको समयमा, हामी एक समान आकारको काट्छौं र बिस्कुटको साथ वा बिना सेवा गर्दछौं।
सेक्सनमा "के तपाइँ थप जान्न चाहानुहुन्छ?" यस आईसक्रिमलाई तपाईंको लागि उत्तम बनाउन तपाईंले धेरै तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ।
यस भेनिला रास्पबेरी कट आइसक्रीमको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ?
सम्भव भएसम्म व्यावसायिक हुन कटौतीको लागि, तपाईले प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ वर्ग आधार tetrabrik दूध वा जुस। तिनीहरू ती हुन् जुन कुकीहरू वा वेफरहरूको आकारसँग सब भन्दा राम्रो मेल खान्छन् जुन उनीहरूले प्राय: सेवा दिन्छन्।
अवश्य पनि, तपाइँले शिल्पहरू गर्नुपर्नेछ कि टेट्राब्रिक सकेसम्म राम्ररी फिट होस्। तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो एक तर्फ काट्नुहोस्।
तपाईंले टेट्राब्रिकबाट नोजल हटाउनुपर्दैन तर तपाईंले एक प्रकारको हटाउनुपर्नेछ भित्री धुने र त्यो प्वाल बन्द गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्
पछि यसलाई राम्रोसँग धुनुहोस्, विशेष गरी यदि यो रसबाट बनेको छ ताकि आइसक्रिमले कुनै अनौंठो स्वाद लिन सक्दैन।
अन्तमा, तपाईले बेकि paper कागजको एक टुक्रा राख्नुपर्नेछ जसले नयाँ मोल्डको पूरै आधारमा राम्रोसँग कभर गर्दछ। त्यसैले यो धेरै हुनेछ मोल्डबाट हटाउन सजिलो सकेसम्म समान कटौती गर्न सक्षम हुन एक टेबलमा।
यस काटिएको आइसक्रीमको अर्को रहस्य भनेको तहहरूको क्रम नै समान देखिन्छ तर यो उत्तम छ रास्पबेरी क्रीम तल राख्नुहोस् किनकि यो बाक्लो छ र वजनलाई भनिला तह भन्दा राम्रोसँग राख्छ। यसले काट्नुबाट छुट्टिनुबाट बचाउँछ।
रास्पबेरी लेयरलाई अधिक तीव्र स्पर्श दिन, तपाईं खानाको र drops्गको केही ड्रप थप्न सक्नुहुन्छ। तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ प्राकृतिक रyesहरू जस्तो कि बीटको रस जसले बलियो टोन दिनेछ र आइसक्रीमको स्वादबाट विचलित हुँदैन।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि, एक पटक आइसक्रिम भेला भएपछि, तपाईं यसलाई केही घण्टा फ्रिजरमा छोड्नुहुन्छ ताकि तहहरू राम्रोसँग बस्छन् र जब यो काट्छ यो तपाईंको लागि सजिलो हुन्छ।
र काट्ने कुरा गर्दा, आजको अन्तिम चालले तपाईंको लागि यो कार्य अधिक सजिलो बनाउँदछ। तपाईका लागि यो सजिलो बनाउनको लागि तपाईसँग आवाश्यक हुन्छ चक्कु तताउनु जुन तपाईं प्रयोग गर्न लाग्नु भएको छ। तातो पानी कन्टेनरमा राख्नु उत्तम हुन्छ र पानालाई केही मिनेटहरूको लागि भिजाउनु उत्तम हुन्छ। यस तरिकाले तापक्रम लिनेछ र जब तपाईं यसलाई आइसक्रीमको शीर्षमा राख्नुहुन्छ यसले प्राय: सहजै काट्छ ... हो, तपाईंले यसलाई कटौतीको बीचमा सफा गर्नुपर्नेछ ताकि तिनीहरू धेरै राम्रा छन् र दाग नलाउन्।
म तपाईंसँग यो आइसक्रिम राख्ने बारेमा कुरा गर्दिन किनकि मलाई लाग्दैन कि यो फ्रिजरमा एक हप्ता पनि बाँच्नेछ। यो यति स्वादिष्ट छ कि तिनीहरूले तिम्रो हातमा लिनेछन्.
थप जानकारी - नीबू र निम्बू आइसक्रिम
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सामान्य, ल्याक्टोज असहिष्णु, Years बर्ष भन्दा बढी, Postres, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » रास्पबेरी भेनिला आइसक्रीम काट्नुहोस्